मतगणनाको नतिजा:कुन पार्टीका उम्मेदवार कति स्थानमा बिजयी भए ? « Naya Bato
मतगणनाको नतिजा:कुन पार्टीका उम्मेदवार कति स्थानमा बिजयी भए ?
सोमवार, जेठ १, २०७४ काठमाडौ : प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ का ३४ जिल्लाका दुई सय ८१ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा आइतवार भएको मतदानको मतगणना शुरु भएको छ । मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको नतिजामा विजय प्राप्त गरेका र अग्रस्थानमा रहेका स्थानीय तह विवरण यस्तो छ ।
काँग्रेसले उठाएका उम्मेदवार र बिजय प्राप्त गरेका स्थान
काँग्रेसका एक सय ५२ जना गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मध्ये एउटा गाउँपालिकामा बिजय प्राप्त गरेको छ भने एउटा गाउँ पालिकामा अग्रता हासिल गरेको छ । काँग्रेसका एक सय ५१ स्थानमा उठाएका उम्मेदवार मधये एक स्थानमा अग्रता प्राप्त गरेको छ । काँग्रेसका ९० जना मेयर पदका उम्मेदवार मध्ये एक स्थानमा अग्रता र एक स्थानमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । काँग्रेसका ८६ जना उपमेयरका उम्मेदवार मध्ये एक स्थानमा अग्रता प्राप्त गरेका छन् ।
काँग्रेसका दुई हजार तीन सय १० जना वडा अध्यक्षका उम्मेदवार मध्ये १७ स्थानमा बिजय प्राप्त गरेका छन भने एक स्थानमा अग्रता र एक स्थानमा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन ।
काँग्रेसका चार हजार पाँच सय ७८ जना सदस्य मध्य ३३ स्थानमा बिजय प्राप्त गरेका छन भने एक स्थानमा अग्रता र एक स्थानमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन । काँग्रेसका दुई हजार दुई सय ९० जना महिला सदस्य मध्ये २० स्थानमा बिजय प्राप्त गरेका छन भने एक स्थानमा अग्रता हासिल गरेका छन । काँग्रेसका दुई हजार ९८ जना दलित महिला सदस्य मध्ये २२ जनाले बिजय प्राप्त गरेका छन ।
एमालेले उठाएका उम्मेदवार र बिजय प्राप्त गरेका स्थान
एमालेले उम्मेदवार उठाएका एक सय ५३ गाउँपालिकाका उम्मेदवार मध्ये कुनैमा पनि अग्रता हासिल गरेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छैन । एमालेले एक सय ५२ वटा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठाएको छ । एमालेले उठाएका ९० जना मेयरका उम्मेदवार मध्ये एक नगरपालिकामा अग्रता हासिल गरेका छन भने एक स्थानमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन । एमालेले ८२ जना उपमेयर का उम्मेदवार उठाएको छ । एमालेले उठाएका दुई हजार दुई सय ५४ जना वडा अध्यक्ष मध्ये तीन जना वडा अध्यक्षले बिजय प्राप्त गरेका छन् । एमालेका एक वडा अध्यक्ष अग्रस्थानमा र एक स्थानमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन । एमालेले उठाएका चार हजार चार सय ४३ सदस्यका उम्मेदवार मध्ये नौ स्थानमा बिजय प्राप्त गरेका छन् । एमालेले उठाएका दुई हजार दुई सय ४० जना महिला सदस्य मध्ये आठ जना बिजयी भएका छन । एक स्थानमा एमालेका अग्रस्थानमा देखिएका छन भने एक स्थानमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन । एमालेले उठाएका दुईहजार ९२ दलित महिला सदस्य मध्य २४ स्थानमा बिजयी प्राप्त गरेका छन । एक स्थानमा अग्रस्थानमा रहेका छन ।
माओवादी केन्द्रले उठाएका उम्मेदवार र बिजय प्राप्त गरेका स्थान
नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएका एक सय ३९ वटा गाउँपालिकाका उम्मेदवार उठाएको मध्ये एक स्थानमा दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले उठाएका एक सय ३७ वटा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका उम्मेदवार मध्ये एक स्थानमा दोस्रो स्थानमा देखिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले ७६ वटा नगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार उठाएको छ । माओवादीले ८६ वटा नगरपालिकामा उपमेयर उठाएका मध्ये दुई स्थानमा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रले उठाएका दुई हजार ८२ जना वडा अध्यक्ष मधये एक जनाले विजय प्राप्त गरेका छन । माओवादी केन्द्रले उठाएका चार हजार ७९ जना सदस्य मध्ये दुई स्थानमा बिजय प्राप्त गरेका छन । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले उठाएका दुई हजार आठ महिला सदस्यका उम्मेदवार मध्ये एक स्थानमा बिजय प्राप्त गरेका छन भने एक स्थानमा दोस्रो स्थानमा देखिएका छन । माओवादी केन्द्रले उठाएका एक हजार आठ सय ५१ जना दलित महिला सदस्य मध्ये १२ स्थानमा बिजय प्राप्त गरेका छन भने एक स्थानमा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन ।
राप्रपाले उठाएका उम्मेदवार र बिजय प्राप्त गरेका स्थान
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक सय नौ गाउँपालिकामा अध्यक्षको र ९० वटा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठाएको छ । राप्रपाले ८० वटा नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार उठाएको छ भने उप्रमुख पदमा ७९ जना उम्मेदवार उठाएको छ । राप्रपाले एक हजार दुई सय ७१ जना वडा अध्यक्षका उम्मेदवार उठाएको छ । राप्रपाले उठाएका दुई हजार आठ जना वडा सदस्यका उम्मेदवार मध्ये एक स्थानमा बिजय प्राप्त गरेका छन ।अन्नपूर्ण पोस्टबाट
संसदका लागी कुर्सी र माइक खरिदमा यतिसम्मको ठूलो भ्रष्टाचार
सात कक्षामा पढ्ने छात्रालाई ११ कक्षामा पढ्ने छात्रले हैरान बनाएपछि घट्यो यस्तो दुर्घटना
अब नेपाली कामदारलाई पनि अस्ट्रेलियामा रोजगारीको अवसर
गुण्डा खोज्दै प्रहरी: मनोज पुनको इन्काउन्टर नसेलाउदै अर्का ‘गुन्डा नाइके’ पक्राउ
अनुदान संरचना: ‘घर हो कि, शौचालय हो कि बाख्राका खोर ?’
छोराको जन्मदिन मनाउँन बालुवाटार आएका मोहन प्रशाद कसरी बने पत्रकार ?
‘धुर्मुस’को व्यंग्य स्मरण गर्दै ओलीले भने: यसपाली ‘उपप्रधानमन्त्री’ नबनाउने
जमिन मुनी रहेको बिश्वकै एक अनौठो गाँउ ! जहाँ यसरी जिउँछन् मानिसहरु (फोटोफिचर)
एक्सनमा लालबाबुः तारे होटल, सिमेन्ट उद्योग र अस्पताल माथि धमाधम कारवाही
१९५० को नेपाल-भारत असमान सन्धी खारेज गरेरै छाड्ने दाउमा ओली
सिरियामा ३० दिने युद्धविराम अनुमोदन, परिमाण यस्तो भयानक हुन सक्ने!
कुखुराको पखेटाले गर्दा महिलालाई पर्यो १० लाख डलरको चिट्ठा, महिला मालामाल
जब बेहुली आफैं जन्ती लिएर बेहुलाको घर पुगेपछी गाउँले सबै चकित